ယင်းကို install ရှုခင်း mods ၏အဘယ်သူမျှမပေါ်လာ FSX နှင့် P3D
မေးခွန်း ယင်းကို install ရှုခင်း mods ၏အဘယ်သူမျှမပေါ်လာ FSX နှင့် P3D
2 နှစ်ပေါင်း6months ago -2နှစ်ပေါင်း6months ago #450 by StargateMax
ငါပါမယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကိုငါဒီ site ကနေ download လုပ်အများအပြားရှုခင်း add-ons တွေကို, installed ပါပြီ FSX နှင့် Prepar3D။ ရှုခင်းအဘယ်သူအားမျှသမျှ (s) ကိုဂိမ်းပေါ်လာမှာ။ အဆိုပါလေယာဉ်ပျံ add-ons တွေကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပေမယ့်အဲဒီအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားဘူး။
ငါသည်လည်းအရမ်းဒီဟာဝိုင်ယီရှုခင်းနီးပါး7Gb နှင့် Kauai တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ငါဂိမ်းထဲမှာတွေ့မြင်အားလုံးဖွင့်ရှေ့တော်၌တူသော default အ crappy ရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း6months ago နေဖြင့် StargateMax.
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #451 by Dariussssss
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #452 by StargateMax
) (တောင်းပန်ပါတယ် 1) မင်္ဂလာပါ
2) ဤတွင်ငါဆိုသည်ကားရန်ရှိသည်: ဖတ်4အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
4) ကြှနျုပျတို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားရိုင်းစိုင်းစဉ်းစားပါနဲ့တူအိုကေ, ငါသွားကြောင်းတယ်, ငါနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုတွေ, ပုံရသည်။
5) Bye ။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #453 by Gh0stRider203
ငါသည်သင်တို့စကားမပြောတတ်သည့် Hawai'i တဦးတည်းကိုသိထင်ပါတယ်။ က install လုပ်စေခြင်းငှါစဉ်တွင်သင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်, ဂိမ်းကထည့်သွင်းဖို့ကြပေမည်။ မရအတော်လေးသေချာဘာကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသောအမှုပါပဲ။
သင် lemme လုပ်ဖို့ဘယ်လိုမသေချာဆိုရင်သိကြနှင့်ငါနှင့်အတူ ya ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
2 နှစ်ပေါင်း6months ago -2နှစ်ပေါင်း6months ago #454 by Dariussssss
ဘယ်ရှုခင်းအထုပ်ကိုသင် install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသလဲ
သင်ကညာဘက်ကိုကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ငါဒီကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ရှုခင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့အပေါငျးတို့သအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း6months ago နေဖြင့် Dariussssss.
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #457 by StargateMax
လတ်ဆတ်တဲ့ start ကြပါစို့, အများကြီးပိုကောင်းသည်ဟုလမ်းခံစားရပါတယ်။ အထက်အကြောင်းကိုဝမ်းနည်းပါတယ်။
ငါ Kauai တွင်, တောင်, ကြီးတွေဟာဝိုင်ယီ photoreal vol 1-2-3 ဗူးကြောင်း installed ဧဝရက်, ဖီဂျီ, Balearic ကျွန်းများ v2 ။
Installer ကိုသူတို့အလိုအလျှောက် install လုပ်ထားပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်နဲ့ကျွန်မသူတို့ရှုခင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်ယူဆ။
ငါရှုခင်းစာကြည့်တိုက် (နှစ်ဦးစလုံးဂိမ်း) တွင်အသစ်ကဘာမျှမကိုမြင်တော်မူ၏။
ထိုအခါအကြှနျုပျသ Addon ရှုခင်းဖိုင်တွဲ (နှစ်ဦးစလုံးဂိမ်း) သို့ကြည့်ရှုလျက်, ငါ installed ခဲ့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းသူတို့သီးခြားစီ installed တယ်ထင်ပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်သူတို့ကို add နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုနေရာချထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ဤနေရာတွင်ဤပြန်ကြားချက်ကိုရေးသားနေစဉ်ကျွန်မရုတ်တရက်တစ်ဦးအလင်းမီးသီးယခုအချိန်တွင်တယ်။ ငါရှုခင်း (မ "Addon") ဖိုင်တွဲသို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဝေးဆင်းပြီး, ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုတွေ့ရှိရ! နှင့်အလုပ်အဲဒီမှာမကနေရှုခင်းစာကြည့်တိုက်မှသူတို့ကိုထည့်သွင်း။
ငါကဖြေရှင်းတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါကအတူ messing ၏2ရက်အကြာမှာတကယ်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်, ငါ့သဘောထားကိုသည်းညည်းခံနေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါသည်ဤ post ကိုငါလုပ်ခဲ့တယ်တူညီတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အခြားမည်သူမဆိုကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #464 by Dariussssss
ငါအတူတူပါပဲဘာကြောင့်လဲသိ happening.Don't ခဲ့ပေမယ့် installers ဆိုးဆိုးရွားရွားမှားယွင်းတဲ့အရာအခြို့လုပ်နေတာ။ တစ်ခုမှာလျော်သော update ကိုတကယ်လိုအပ်နေပါသည်။
ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ရဲ့ကြည့်ဖို့ nice ။ ဒါကြောင့်ယခုသင်တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်သောအခါနောက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်ရတယ်။ , ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကူညီကြမည်အကြောင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပြောပြပါ။
0.338 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်